पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गर्दै कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल किन गए पाथिभरा दर्शनमा ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गर्दै कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल किन गए पाथिभरा दर्शनमा ?
प्रकाशित मिति : २०७६, २९ मंसिर आईतवार १९:१५
काठमाडौं । आइतबार बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले बहिस्कार गरेको छ । बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिका सम्बन्धि प्रस्ताव पेश नभएको भन्दै पौडेल समूहले बैठक बहिस्कार गरेको हो ।
पार्टीमा विभाग थप्ने लगायत विभिन्न ९ वटा प्रस्ताव प्रस्तुत भएको बैठमा महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने सम्बिन्धि प्रस्ताव पेश हुनुपर्ने माग पौडेल समूहले राख्दै आएको छ । बैठकमा प्रस्तावित एजेण्डाहरुलाई सहमतिमा पारित गर्न आन्तरिक छलफल तिव्र पारिएको र सहमति नजिक नेताहरु पुगेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।
वरिष्ठ नेता पौडेल पाथिभारा दर्शनका लागि सपरिवार गएकाले आइतबारको बैठकमा उपस्थित भएनन् । बैठकमा प्रस्तुत भएका एजेण्डाहरुमा आइतबार सामान्य छलफल भएपनि उपनिर्वाचनको समीक्षामा बैठक केन्द्रित रहेको उनले बताए ।
प्रवक्ता शर्माले बैठकका एजेण्डाहरु पदाधिकारी बैठकमा सहमति भएपछि तय भएको र सबैको सहमतिबाट नै पारित हुने दाबी गरे । महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन समिति भएको र केन्द्रिय समितिले महाधिवेशनको मिति मात्रै तय गर्ने शर्माले बताए ।
आइतबारको बैठकमा पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलबीच शनिबार भएको छलफलका विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।
स्थानीय तहहरुको समायोजन पौष महिनाको मध्यसम्म सक्ने निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको र त्यसपछि कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव देउवाले पौडेललाई राखेको निधिले बैठकमा बताएका थिए ।
अस्पताल पुगेर प्रचण्डले लिए विश्व कीर्तिमानी तामाङको स्वास्थ्यस्थितिबारे जानकारी
ललितपुर । सबैभन्दा कम उमेरमा सगरमाथा आरोहण गरेका आरोही शम्भुु तामाङको स्वास्थ्यस्थिति बारे